Feo Avy Amin’ny Zimbabwe Plus · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jolay 2017 16:55 GMT
Nomen'ny vahoakan'i Zimbaboe ny fahafaham-baràka mavesatra indrindra avy aminy ny ZANU-PF eo amin'ny fitondràna, ary indrindra indrindra fa ireo endrika politika tsy misy tanjona rehetra nanafintohina azy ireo hatreto, satria tena vitsy ireo Zimbaboeiana nandeha nifidy nandritra ny fifidianana izay ho loholona natao tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo (ny herinandron'ny 21 Novambra 2005). Tany amin'ny biraom-pifidianana sasany, 6% monja tamin'ireo mpifidy no naneho ny fanjavonana tsy azo iadian-kevitra ny fifidianana tsy ho anatin'ny fandaharam-potoanan'ny firenena. Nanoratra toy izao This is Zimbabwe ho fanazavana ilay tsy firarahiana,,
“Tsy hisy zavatra hiova na aorian'ny fahazoana antenimieran-doholona. Tsy hampandroso ny demokrasia any Zimbaboe ireo fifidianana ireo; tsy hamaha ny olan'ny tsy fananana asa; tsy hitondra solika ho an'ny firenena: tsy tampoka eo ny olona dia ho afaka hamoky ny zanany sy hahatakatra ny saram-pianarana, tsy ho afaka hahavidy fanafody ireo marary, na hitsabo tena any amin'ny trano fitsaboana manara-penitra ary mbola hiady isanandro hatrany ireo mpampiasa mba hiarovana ny orinasany amin'ny fidangan'ny sondro-bidim-piainana sy ny toekarena mihazakazaka mankamin'ny firodànana”.
Mba hampanako ilay fihetseham-po, manoratra i Zimpundit
“Fantaro izao ry mpamaky malala; tsy hoe akory tsy miraharaha momba ny demokrasia izahay na fanànana ny tena mpanao politika amin'ny toerany na fanontaniana fitsapankevitra ambony hafa tianareo atoraka anay. Tsia, ny tsy firarahianay dia porofo ihany fa miahy zavatra hafa mihoatra noho izay iahianay ny politika sy fitantanana izahay. Ny fiainana ho atrehana rahampitso no mampiasa loha anay. Momba izay hahatafavoaka velona izao no resaka. Toy izany no vokatry ny nanafen'ny ZANU-PF anay ho fiarahamonina tsotra sy tsy be pitsopitsony”.
This is Zimbabwe manamarika tamim-pahagagana fa tsy mbola nahafa-po ny ZANU-PF ny fandresena tsara antoka azony tamin'ny fifidianana. Noho izany,
“Mbola namoaka ny fika malotony ihany izy ireo. Ohatra, olona iray fantatro avy any Intabzinduna avaratr'i Bulawayo no nilaza tamiko fa nanao fampielezankevitra nampiasàna resaka hanina ny ZANU-PF ho an'ny fifidianana Antenimieran-doholona. Nitondra katsaka izy ireo ary izay nifidy ZANU PF tamin'ny fifidianana farany teo ihany no nomeny izany ary noteneniny tamin'ny olona fa tsy hahazo ireo hafa mandra-pitsahatr'izy ireo tsy hifidy ny MDC intsony ! “
Mbola noraofin'ny MDC foana ny seza dimy tao amin'ny antenimieran-doholona tany Bulawayo.
Borondi: Agathon Rwasa miampanga ny tsy nanoloran'ny Firenena Mikambana fialantsiny na fanazavana, herinandro taorian'ny nahitàna fanamian'ny Firenena Mikambana teny amin'ny lehiben'ny mpiasa Agathon Rwasa taorian'ny nisamborana azy tamin'ny herinandro lasa.
DRC: Tao aminà famintinana ireo vaovao izay nameno ny lohateny lehiben'ny gazety tamin'ny Novambra, “Adventures of a Retired Armchair Traveler” nitatitra fa nandrava tobin'ny mpikomy ny tafiky ny Firenena Mikambana sy ny tafika Kongoley, niha-mafy ny fikarohana ireo mpikomy Ogandey ao amin'ny Tafiky ny Mpanohitry ny Tompo (LRA) any RDC, ary Hilary Benn, ilay Britanika sekreteran'ny fampandrosoana dia nandrisika ny governemanta mba hanakarama ny tafika mba hiantoka ny fiarovana.
Malawi: Derain'ny Geeta ny ezaky ny Dignitas International, fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakana izay nisy fiantraikany tamin'ny distrika iasan'ny Dignitas ny fiarahamiasa mitondra zavabaovao niarahany tamin'ny ministeran'ny fahasalamana.
Hazavain'i Mike avy ao amin'ny Hacktivate ny fomba famadihana fidirana ssh izay ankoatry ny zavatra hafa dia manome alàlana hiditra amin'ny loharanon'ny tambajotra ao ambadiky ny aroafo.